किन जाने गाजा दह ? « News24 : Premium News Channel
बागलुङ । तपाईं घुमघामका लागि बागलुङ रोज्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने गाजा दहलाई पनि गन्तव्यमा समेट्नुहोला । प्रकृतिको भव्यतामा रमाउने जो कोहीका लागि यो एक अनुपम थलो हो । पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा सूचीकृत गाजा दह जैमिनी नगरपालिका–३ दमेकमा पर्छ ।